अमेरिकाको न्यु योर्क सहरबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष अन्तर्वार्ता, के-के बताउनु भयो ? – BRTNepal
काठमाडौं: ०७:०७ | Colorodo: 18:22
अमेरिकाको न्यु योर्क सहरबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष अन्तर्वार्ता, के-के बताउनु भयो ?
सुरेन्द्रबहादुर नेपाली, न्यु योर्क २०७५ असोज १३ गते ७:११ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, नाना र छानायुक्त प्रजातन्त्र आवश्यक भएको बताउनु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यहाँ आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न आफूसँग आएका सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका पत्रकार तथा अमेरिकामै क्रियाशील पत्रकारलाई संयुक्त रूपमा दिएको अन्तर्वार्तामा एउटा मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्ने र जसले मानवलाई पूर्णता दिन सक्छ त्यही नै पूर्ण प्रजातन्त्र भएको स्पष्ट गर्नुभयो । “हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन”, एक प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ११ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले अघिल्लो पटक र यस पटक अमेरिका भ्रमण गर्दाको नेपालको अवस्था निकै फरक रहेको बताउँदै नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिका विषयमा विश्वलाई जानकारी दिने र नेपाली जनताको प्रगतिमा उनीहरूको सहयोग जुटाउने आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश
म सन् २००६ मा अमेरिका आउँदा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिमण्डलको नेताका रूपमा आएको थिएँ, अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको छु । त्यस बेला शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको थियो । संविधानको स्वरूप अनिश्चित थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भएको थिएन । राजतन्त्रको अन्त्य भएको थिएन ।
विघटित संसद् पुनः स्थापना भएको थियो । संसद्ले आफ्नो अधिकार सबल ढङ्गले प्रयोग गरेको थियो । राजतन्त्रका अधिकारलाई समाप्त पारी संवैधानिक हैसियतमा राखिएको थियो । पुनः स्थापित संसद्ले राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा राखेको थियो । राजतन्त्र जीवित थियो तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियत नरहेपछि राजतन्त्र भ्रमका रूपमा थियो ।
त्यसलाई पुनः बिउँतिन नदिन विधिवत् अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रश्न, शान्ति प्रक्रिया र बृहत् शान्ति सम्झौता टुङ्गो लागेका थिएनन् । युद्धविरामसम्म भएको थियो र पुनः स्थापित संसद्लाई पुनः गठन गर्ने कुरा चलिरहेको थियो । सङ्क्रमणमा प्रवेश गरेको तर टुङ्गो लागेको थिएन र जनता शक्तिशाली हुने संविधान बन्ने अपेक्षा थियो । मानिसमा जिज्ञासा थियो, ‘‘माओवादीले हतियार बिसाएको छ अब के हुन्छ ?’’ यी प्रश्नको जवाफ नआएको अस्थिर अवस्था थियो ।
माओवादी सम्पूर्ण रूपमा हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक धारमा हिँडेको छ । लडाकु व्यवस्थापन गरी सरकारमा आएको छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक बाटामा हिँडिरहेको पुरानो पार्टी नेकपा एमालेसँग एकता गरी एकीकरण भएको छ । आमूल परिवर्तनको अवस्था छ । भिन्न परिवेशमा भिन्न अनुभव गरेको छु । आफैँले सञ्चालन गरेको र आफैँले नेतृत्व दिएको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर आएको असाधारण उपलब्धि र अनुभव साझेदारी गर्ने अवसर पाउँदा बेग्लै अनुभव हुन्छ । अगाडि बढ्ने आशा र विश्वास हुन्छ ।
मैले स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँग भेट गरेँ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट गरेँ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेट गरेँ । औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गले भेटघाट भइरहेका छन् ।
हाम्रो शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलन अनौठो कथाजस्तो भएको छ । सुन्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र अगाडि जाने कुरामा उहाँहरूले विश्वास र सहकार्यको सङ्केत दिनुभएको छ । कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । अरूले पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको, स्थायित्व आएको, संविधानको सर्वग्राह्यता स्वीकार्य भएको र निर्वाचन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । अब नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूमा मैले पाएको छु ।
३) ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ आन्तरिक रूपमा अति आवश्यक छ तर विभाजित विश्वमा नेपालले कसरी सहयोग प्राप्त गर्ने ?
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा महासभाका अध्यक्ष र महासचिवले राखेका कुराले अर्थ राख्छ । उहाँहरूको सोचाइमा राष्ट्रहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व भएको पाइयो । राष्ट्र सङ्घको सोचाइले विषय दिन्छ । महासभाका अध्यक्षका अभिव्यक्ति सामाजिक जागरणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण छ । अध्यक्षका सात बुँदाले पूर्ण लोकतन्त्र इङ्गित गर्छ । कसैले सैद्धान्तिक आग्रहले शब्द चुट्न सक्छ । हाम्रो प्रश्न शब्दसँग होइन समाजवादोन्मुख सामाजिक व्यवस्थासँग छ ।
हाम्रो समाज खाली प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अधिकार वा अरू प्रकारका स्वतन्त्रताको हकमा सीमित हुनुहुँदैन । जनताको जीवनमा सम्पूर्ण तामा परिवर्तन हुनुपर्छ । एउटा मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्छ । एउटा परिवार मात्रै सम्पूर्ण परिवार हुन सक्दैन, सम्पूर्णता सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ । समाजको सम्पूर्णता र समृद्धि सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ । हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन । हामीलाई खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ । सबै कुरा भएको प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ । महासभाका अध्यक्षका प्राथमिकताका बुँदामा यी धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ ।
राष्ट्रका अवस्था, स्थिति र चाहना भिन्न होलान् र ती कुरालाई राष्ट्रले अभिव्यक्त गर्न सक्छ । हामी आफ्ना अवस्था बदल्न चाहन्छौँ । हामी दुनियाँमा शान्ति, समृद्धि, समानता र न्याय चाहने जनता तथा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छौँ । हामी न्यायोचित हितको प्रतिनिधित्व गर्छौँ । आवश्यक नभए मानिसले राम्रो चिज पनि किन्दैन । हामी राम्रो काम प्रस्तुत गर्छौँ र राम्रोतर्फको यात्रा बलियो हुन्छ ।
४) शान्ति स्थापनामा आएको रकम घट्दो छ । विरोध पनि छ नि ?
५) शान्ति सेनामा खर्च कटौतीको कुरा नि ?
शान्ति सेनामा खर्च धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, शान्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो । युद्धको खेती र निर्यात बन्द गरे यस्तो खर्च आवश्यक पर्दैन ।
६) भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसँग भएका वार्ताका विषय ?
७) स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कुरा ?